पाँच नम्बर प्रदेशमा नेकपाको जिल्ला नेतृत्व, कसले कहाँ पाए जिम्मेवारी ? | Ratopati
पाँच नम्बर प्रदेशमा नेकपाको जिल्ला नेतृत्व, कसले कहाँ पाए जिम्मेवारी ?
personरातोपाटी संवाददाता exploreरुपन्देही access_timeसाउन ५, २०७६ chat_bubble_outline0
बुटवल-सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले ७७ जिल्ला इन्चार्ज तथा सहइन्चार्ज तोकेको छ । ६ महानगरका इन्चार्ज पनि चयन भएका छन् । आइतबार बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले इञ्चार्ज तथा सहइन्चार्जहरु तोकेको हो । त्यसैक्रममा पाँच नम्बर प्रदेशका १२ जिल्लामा पनि इञ्चार्ज तथा सहइन्चार्जहरु तोकिएका छन् । पाँच नम्बर प्रदेशका तीन जिल्लामा सह ईन्चार्ज तोकिएका छैन् दाङ जिल्लामा १० वटा सहईन्चार्ज तोकिएका छन् ।
पाँच नम्बर प्रदेशको अस्थाई राजधानी रुपन्देहीमा लिला गिरीलाई इञ्चार्ज तोकिएको छ । उनी प्रदेशको बाहलवाला मन्त्री हुन् भने सहइन्चार्जमा एकराज विश्वकर्मा, खिमलाल भट्राई र दघिराम न्यौपानेलाई तोकिएको छ ।
भट्टराई राष्ट्रिय सभामा नेकपा प्रमुख सचेतक हुन् भने न्योपाने प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । नवलपरासी पश्चिममा ईन्चार्ज बैजनाथ चौधरी तोकिएका छन् । उनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वधार मन्त्री हुन् ।
कपिलवस्तु इन्चार्जमा गिरीधरीलाल न्यौपाने, सहइन्चार्जमा विमला घिमिरे ,पाल्पाको इञ्चार्जमा सोमप्रसाद पाण्डेय , सहइञ्चार्जमा तुलाराध घर्ती रहेका छन् । गुल्मीमा दिनेश पन्थीलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । यस्तै अर्घाखाँचीमा नजिर मियाँलाई इन्चार्ज रहेका छन् । सहइन्चार्जमा सुशीला श्रीपाली ठकुरी रहेको उल्लेख छ ।
प्युठानमा कृष्णध्वज खड्का रहेका छन् भने दाङ जिल्ला इन्चार्जमा जीवन गौतम रहेका छन् । धेरै सहइन्चार्ज पनि यहि जिल्लामा तोकिएको छ । ईन्द्रलाल थारु, दानाकुमारी शर्मा,नारायणी शर्मा, निर्मल आर्चाय, नरुलाल चौधरी, भागवत विश्वासी, मेठमणि चौधरी , हेमराज शर्मा पोखरेल, शान्ता चौधरी रहेका सहइन्चार्ज छन् । दाङ मुख्यमन्त्री तथा पाँच नम्बर प्रदेश इन्चार्ज शंकर पोखरलेको गृह जिल्ला हो । रुकुम पूर्व खेममान खड्कालाई इन्चार्ज बनाइएको छ भने सहइन्चार्जमा कमला रोका र तेजबहादुर ओली रहेका छन् ।
रोल्पामा दिपेन्द्र पूनलाई इन्चार्ज तोकिएको छ भने सहइन्चार्जमा ताराकुमारी घर्ती र नविन रोकामगर रहेका छन् । बाँकेमा इन्चार्ज दिनेश यादव, सहईन्चार्जमा पूर्णकुमारी सुवेदी,महेश्वरजङ गहतराज,मोहमद हारुम हलुवाई रहेका छन् । बर्दियाको इन्चार्जमा लक्ष्मण ज्ञवाली,सहइन्चार्जामा तिलकराम शर्मा र शन्तकुमारी चौधरी रहेका छन् ।
नेपाली सेनामा स्वीकृत दररेटभन्दा बढी भुक्तानी गरेर अनियमितता !
अरनिको राजमार्ग ११ ठाउँमा अवरुद्ध, तातोपानी नाकासँग सम्पर्कबिच्छेद
राजधानीमा छिट्टै साझा बस चल्ने, सुरु भयो तयारी
पानी परेपछि काठमाडौंमा फोहर व्यवस्थापनको समस्या
बेपत्ताको खोजी र उद्धार प्रभावकारी बनाउन नेता खनालको आग्रह
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग
तनहुँमा क्वारेन्टिनमा बसिरहेका बृद्धको मृत्यु
ढुङ्गाको कापमा झाङ्गिएको पीपल हुन् सहाना प्रधान
बन्द भएका भारतीय च्यानललाई अब के गर्ने ? भोलि निर्णय हुुँदै